Rastra Daily | गरिब र अतिविपन्नमा कोरोना परीक्षण खोइ ?
प्रकाशित : २०७७ आश्विन ४, आईतवार
५ असाेज काठमाडौं ( राजधानी दैनिक बाट )सरकारले विपन्न नागरिकको कोरोना परीक्षण निः शुल्क गर्ने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन गर्न सकस देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा गत २८ भदौमा बसेको बैठकले उपचार सम्बन्धमा चिह्न वा लक्षण देखिएका विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के गर्ने ?
विश्वस्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ लाई संक्रामक रोग घोषणा गरिसकेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ (ग) मा सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हकका रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ ।